/ Batching Plant Manager
Supervises and coordinates activities of workers engaged in manufacturing concrete products and delivering ready mix concrete
Supervises and coordinates activities of workers engaged in manufacturing concrete products and delivering ready mix concrete by performing the following duties,
ကွန်ကရစ်များထုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောစပ်ပြီးကွန်ကရစ်များတင်ပို့ခြင်းများကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက် အောက်ပါတာဝန် ဝတ္တရားများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်
Communicates with supervisor, on issues affecting the business and personnel, safety, maintenance, upcoming jobs, competition, and pricing.
Works with Safety Department to ensure compliance government regulations.
Communicates with the Head Quarter on all issues affecting employee hiring, promotion, discipline and termination.
Works with the Quality Control to ensure products meet specifications
ရောစပ်ပြီးကွန်ကရစ်များ၊ပိုက်များ၊ ရေဆိုးကန်များအတွက် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အော်ဒါများလက်ခံခြင်း။
ကွန်ကရစ်အရောတခုစီအတွက် ထည့်သွင်းရမည့် ရေပမာဏကို တွက်ချက်ခြင်း။
ကွန်ကရစ်ဖျော်စပ်သူ မှအရောအနှောတခုစီအတွက်လိုအပ်သောသဲ၊ဘိလပ်မြေ၊ ကျောက်စရစ်နှင့် ရေပမာဏကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ပို့ဆောင်လက်မှတ်နှင့် သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများကို ပြင်ဆင်ပေးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ရေးအတွက် ယာဉ်မောင်းများကို တာဝန်သတ်မှတ်ပေးခြင်း။
လုပ်ခလစာနှင့် ယာဉ်မောင်းမှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
ကုန်တင်ကားခံနိုင်ရည်၊လုပ်ငန်းခွင်အကွာအဝေးနှင့်ကုန်ချချိန်စသော အချက်အလက်များကိုအခြေခံပြီး delivery scheduledများရေဆွဲနိုင်ရန် ညှိုနိုင်းဆွေးနွေးခြင်း။
ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းများ၊ လုံခြုံရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများကို supervisorနှင့်ဆက်သွယ်ဖြေရှင်းခြင်း။
ကုန်မှာစာရင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက် ပေးပို့ခြင်းကို ကွပ်ကဲခြင်း
ယာဉ်မောင်းထံမှပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ငွေလက်ခံခြင်းနှင့် ငွေစာရင်အားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အရောင်းစစ်ဆေးခြင်း။
အစိုးရ၏စည်းမျဉ်စည်းကမ်းများနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
အလုပ်သမားငှားရမ်းခြင်း၊ ရာထူးတိုးခြင်း၊ အလုပ်မှရပ်စဲခြင်း နှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ခြင်းစသော ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ရုံးချူပ်သို့တင်ပြခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
Relevant work experience asabatching plant manager.
Adequate knowledge of business and management principles Familiarity with industry standard equipment and technical expertise.
Able to work in Bago, Myanmar
Batch plant Manager ရာထူးအတွက် သင့်လျော်သောအတွေ့အကြုံရှိရမည်
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများနှင့် နည်ပညာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပက်သက်၍ လိုအပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုဗဟုသုတရှိရမည်။
လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးစီမံခြင်းစသော ဗဟုသုတရှိရမည်။
Interested applicants please send in resume to admin@hmsmyanmar.com